“बैंक पनि साथि पनि” ब्रान्डिङ्ग स्लोगनले ल्यायो एनआइसी एशियामा परिवर्तन, निक्षेप र मुनाफा बढ्दै | Safal Khabar
शुक्रबार, १४ माघ २०७८
“बैंक पनि साथि पनि” ब्रान्डिङ्ग स्लोगनले ल्यायो एनआइसी एशियामा परिवर्तन, निक्षेप र मुनाफा बढ्दै
शनिबार, २० माघ २०७४, १० : ५०
काठमान्डौ । ‘एनआइसी एशिया बैंकको बैंक पनि, साथि पनि’ भन्ने ब्रान्डिङ्ग स्लोगनले बिगत एकबर्ष देखी नेपाली बजार तताएको छ । यसले एनआइसी एशियाको बिजनेस ग्रोथ अत्याधिक बढेको बैंकले जनाएको छ ।
गत वर्ष वाणिज्य बैंकहरुमा सबैभन्दा बढी ब्रान्डिङको लागि खर्च गर्ने बैंक एनआईसी एशिया हो । एनआईसी एशिया बैंकले गत आर्थिक वर्षमा विज्ञापनमा मात्रै १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस आर्थिक वर्षमा यसको दोब्बर रकम खर्च गर्ने रणनीति बैंकको रहेको छ ।
एक वर्षदेखि ब्रान्डिङ र शाखा बिस्तारले एनआईसी एशियाको निक्षेप एक वर्षको अवधीमा ५५ प्रतिशतले बढेको छ । पुस मसान्तको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण अनुसार एनआईसी एशिया बैंकको निक्षेप १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । निक्षेपमा स्वदेशी मुद्रामा १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ र विदेशी मुद्रामा ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ छ । यस्तै पुस मसान्तसम्ममा १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रबाह गरेको छ भने कर्जा विस्तार एक वर्षको अवधीमा ५४ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । शाखा विस्तार र ब्रान्डिङको रणनीतिले नै निक्षेप र कर्जा बढेको र आगामी दिनमा मूनाफाको प्रतिशत उच्च हुदँै जाने बैंकको दाबी रहेको छ ।
यस्तै कर्जा विस्तारको हिसाबले एनआईसी एशिया तेस्रो स्थानमा छ । ऋण प्रबाहबाट ५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेको छ । निक्षेपकर्तालाई ब्याज वापत ४ अर्ब तिर्दा १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेको बैकले जनायको छ । विभिन्न सेवा प्रवाह कमिसनबाट ११ करोड, विदेशी मुद्राको कारोबारबाट १२ करोड तथा अन्य संचालन आम्दानी ३० करोड छ ।
एनआईसी एशियाले पुस मसान्तसम्ममा ५७ करोड १७ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । निक्षेप र कर्जा बढेपनि बैंकको नाफा भने २० प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्ष पुस मसान्तमा ७३ करोड नाफा कमाएको बैंकले यो वर्ष ५७ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । यो वर्ष संचालन खर्च बढी भएको हुँदा नाफामा असर गरेको भएपनि आगामी वर्ष त्यो खर्च नहुँने हुँदा नाफा बढ्ने बैकले बताएको छ । “शाखा खोल्दा संचालन खर्च बढेको हो, सबै शाखाले निक्षेप बढाएका छन्, अर्कोवर्षदेखि खर्च कम हुने हुँदा नाफा बढ्छ” बैंकको दाबी छ ।
जसले धेरै खर्च गर्छ उसैलाई बजेट धेरैः अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा
यो साता नेप्से परिसूचक १५१.६१ अंकले गिरावट
राष्ट्र बैंकले साढे १० करोड रुपैयाँ ब्याजमा लगानी गर्ने
आजको विदेशी मुद्रा विनिमय दर यस्तो छ ?
सुनको मुल्य घट्यो, कति पुग्यो तोलाको ?
भिजिट भिसामा दुबई आएका नेपाली स्वदेश फर्किए
स्थानीय निर्वाचनबारे गठबन्धनले सारेको विकल्प संविधानसम्मत छैनन : कांग्रेस महामन्त्री थापा
माघ मसान्तसम्म स्वीमिङपुल र डान्सबारलगायत बन्द गर्न सिफारिस
ट्याक्सी र निजी सवारीमा बाहेक जोरबिजोर हट्यो, (प्रशासनको आदेशसहित)
सात उपसचिवलाई सहसचिवमा र १६ अधिकृतलाई उपसचिवमा बढुवा
वैशाखमै चुनाव गर्न देउवालाई किन दिइन् राष्ट्रपतिले दबाब ?
एमालेका पूर्वमाओवादी नेता असन्तुष्ट, सामूहिक राजीनामा दिने
अर्थमन्त्री हुँदा विष्णु पौडेलले आवश्वक नै नपर्ने अर्को टर्मिनलका लागि किन छुट्याए अर्बौ बजेट, चलखेलको आशंका
खेलकुद मन्त्री गहतराजले गरे गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको निरीक्षण
सम्बन्ध विच्छेद गरेका छोरी-ज्वाइँ फकाउँदै रजनीकान्त
दुई सय किसानलाई गाई बाँड्ने अभियान सुरु
अख्तियारले प्रमाणपत्र छानविन गरेपछि हरि खड्काले भने– प्रमाणपत्र जल्यो
प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न प्रचण्ड र माधव नेपाल बालुवाटारमा
राज्यमन्त्रीको निजी सुरक्षाकर्मी मृत फेला
माघ २४ देखि फेरि काठमाडौं र ललितपुरका विद्यालय खोल्नुपर्ने
तीन न्यायाधीशसहित २५ जनालाई कोरोना
कोरोना संक्रमण भयावह बन्दै, २४ घंटामा थप २ हजार ४४४ जना संक्रमित
प्रधानमन्त्री कपको फाइनलमा एपीएफ र पुलिस भिड्ने
शालिग्राम शिलामा माघे सङ्क्रान्ति मेला लगाउन रोक
एमाले एक्लै चुनाव लडे एक सिट पनि जित्दैन : मन्त्री खतिवडा
सिसिएमसी बैठक : सङ्क्रमण बढे स्मार्ट लकडाउन, बुष्टर खोप अघि बढाउने अनुमति
काठमाडौं उपत्यकामा उच्च सतर्कता
बतासमाथि एकतर्फी चरित्रहत्या र मानमर्दन : महासंघ